mercredi, 15 septembre 2021 23:19
Lavanila : Manomboka androany 15 septambra ny fahafahana manondrana any ivelany
Araka ny tetiandro navoakan'ny ministeran'ny varotra, dia misokatra androany alarobia 15 septambra 2021, ary mifarana ny 31 mey 2022 ny fanondranana lavanila.
Androany alarobia 15 septambra 2021, andro fanombohana ny fanondranana lavanila izany anefa, dia mbola tsy nivoaka ny lisitr'ireo orinasa mahazo manondrana izany vokatra izany.
mercredi, 15 septembre 2021 21:24
Vidin'entana 4 janoary 2016
(Tsiahy lahatsoratra tamin'izay)
Vidin'entana eny an-tsena:
Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny vidin'entana eny an-tsena.
Niakatra 9600 ariary (48 000 fmg) ny iray kilao amin'ny henan'omby.
Haricot vert lasa 2 000 ariary (10 000 fmg) ny kilao.
Ny voankazo tsy misy latsaky ny 2 000 ariary ny kilao.
Ny tongolo sy voatabia dia lasa 200 ariary ny tokony, voany telo eo.
Ny menaka amin'ny tavoahangy mihidy lasa 5 400 ariary (27 000 fmg)
Ny vary no mbola tsy nisy fiovana firy, manodidina ny 1600 ariary (8000 fmg) ny kilao.
5 Taona aty aoriana, niakatra avo roa heny avokoa ny vidin'entana, ary raha tsy misy fiovana ny lamina ara-toekarena, dia hitohy hatrany izany fiakarana izany, ka ho tafakatra avo 3 heny indray izany afaka 5 taona manaraka.
mercredi, 15 septembre 2021 11:31
Fizahantany : Masoandro - Ranomasina - Tontolon-javaboary - Fandraisana
Anisan'ny singa ilaina amin'ny fizahantany ireo, ary ananantsika eto Madagasikara. Anisan'ny zavatra tadiavin'ireo mpizahatany tokoa, na anatiny na ivelany, ny hafanana, ny masoandro, ny ranomasina, ny tontolon-javaboary ary ny fomba fandraisana.
Misy ihany koa anefa ireo mpizahatany, mitady ny vakoka, ny fomban-tany, ireo zava-maniry sy biby, ny kanto sy ny fahanginan-toerana, nefa dia mitaky ny fandriam-pahalemana sy ny fahalavorarian'ireo toeram-pandraisana tanteraka izy ireny.
Tsy latsan-danja amin'izany ireo tolotra azo omena ny mpizahatany raha ny eto Madagasikara.
Mila ezaka arak'izany ny fanamboarana ireo lalana mihazo an'ireny faritra ireny, ny fampandriana fahalemana ny toerana, ny fandavorariana ny toeram-pandraisana sy ny fanofanana ireo mpiasa sy mpisera amin'izany sehatra izany, na hotely fandraisam-bahiny io, na toeram-pisakafoanana, na toerana fialam-boly sy fanaovana lanonana, na ireo fiara mpitatitra, na fiara-manidina na fiara an-dalamby, na an-dranomasina, na an-tanety, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
mercredi, 15 septembre 2021 10:46
Fanjifana : Ho raisin'ny Vondrona HABIBO ny Tranombarotra Shoprite rehetra manerana ny Nosy
Nifanaraka ny Vondrona Shoprite atsy Afrika Atsimo fa dia ho raisin'ny Vondrona HABIBO ny tranombarotra Shoprite 10 eto Madagasikara amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny "Système U" any Frantsa.
mercredi, 15 septembre 2021 10:33
Haintrano tany Fasintsara : Nitondra ny fanampiana ny fitondram-panjakana
Nitarika ny delegasiona tany Andranomaitso, Kaominina ambanivohitr’i Fasintsara, Distrika Ifanadiana ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny talata 14 septembra, nijery ifotony ny fahavoazan’ireo mpiray tanindrazana, sy nampahery azy ireo, ary nitondra fanampiana tamin’ny anaran’ny fitondram-panjakana taorian’ny fahamaizana niseho tao an-toerana.
Isan’ireo delegasiona tamin’izany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Mponina, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Solombavam-bahoaka voafidy tao Ifanadiana.
Niandraikitra ny filaminana sy ny asa fanarenana ny Tafika Malagasy sy ny Zandarimariam-pirenena, ary nankinina tamin’ny BNGRC kosa ny fandaminana sy fizaràna ny vatsy.
Mety hiteraka loza ny “Bac” mampitohy an’i Mananara sy Maroantsetra, amin’ny lalam-pirenena faha-5 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana. Ho avy rahateo ny fotoam-pahavaratra.
Misy vaky ka tsy mahazaka fiara vaventy intsony ilay “Bac” eo an-tananan’i Fahambahy.
10 000 Ariary ny saram-piampitana eto, ary mbola mandoa vidina gazoala.
Kitra - Amboaran'ny Kaofederasionina : Mampanantena hitondra fandresena ny CFFA Andoharanofotsy
Hiazo an’i Lusaka Zambia ny Alahady ny klioba CFFA Andoharanofotsy hiatrika ny lalao miverina amin'ny Kabwe Warriors Zambia ao anatin'ny fiadiana ny Amboaran'ny Kaofederasionina.
Hanainga anio alarobia 15 septambra ny delegasiona, ka fiaramanidina manokana izay avy amin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no hitondra ny CFFA hiazo an'i Lusaka.
Noraisin'ny Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahantena, Mamod'Ali Hawel tetsy Ambohijatovo, ireo delegasiona mandrafitra ny CFFA izay notarihan'ny filohan'ny Klioba, Rakotoarimanana Henintsoa dit Tôta, ary dia nahazo tso-drano sy vatsin-dalana avy amin'ny Minisitra ho entina miatrika izany lalao izany.
Vonona haka ny tapakila ny CFFA hiakarana aminy dingana manaraka hoy i Tota Filohan’ny CFFA izay nisaotra ny Filoham-pirenena sy ny Minisitra ary nampanantena ny hitondra fandresena.
mercredi, 15 septembre 2021 10:05
Vitrine du Vakinankaratra : Hotanterahina ny 30 septambra hatramin’ny 02 oktobra 2021
Hotanterahina ao Antsirabe ny 30 septambra hatramin’ny 02 oktobra 2021 ny “Vitrine du Vakinankaratra”. Hetsika ara-toekarena karakarain’ny Fivondronan’ny Orinasa Vakinankaratra ( FIOVA ) izy ity.
Misy ny vinavina hametrahana indostria misahana manokana ny vary ny any Vakinankaratra, anentanana ireo mpandraharaha hampiasa vola eny ifotony.
QMM Tolagnaro : Hasiana vala ara-indostrialy mirefy 15ha hatokana ho an’ny mpampiasa vola
Nandray ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa QMM ny minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, Edgard Razafindravahy, ny 14 septambra 2021.
Tonga ny fotoana hoy ny minisitra hampanjariana ny fitrandrahana ataon’ireo orinasa lehibe eto amin’ny firenena, ho amin’ny tena tombontsoan’ny mponina ifotony.
Hotanterahan’ny QMM ny fametrahana fotodrafitrasa vaovao any an-toerana hanampiana ny mponina. Hisy ny vala ara-indostrialy mirefy 15 ha hatokana ho an’ny mpampiasa vola.
Voafaritra ireo seham-pihariana hanomezana tombontsoa ny mponina hanomboka amin’ny fanodinana voankazo, ny tantely ary ny lavanila. Ho hita eo an-toerana avokoa ny fanodinana ny vokatra, ny fitehirizana ary ny fivarotana ny vokatra avy amin’ireo tantsaha mpamboly sy orinasa madinika any ifotony any.
15 septembre : Journée Internationale pour la liberté de l'instruction.